आइफोन १२ भारतमा बन्ने, १२ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामरा कति पर्ला मूल्य ? - Hamro Najar
प्रकाशित मिति: २०७७ भाद्र १७, बुधबार (४ महिना अघि)
आइफोन प्रयोगकर्ताहरुले एप्पलको नयाँ संस्करण आइफोन १२ को व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । आगामी सेप्टेम्बर १० मा एप्पलले आइफोन १२ सिरिज लञ्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । आइफोन १२ को लुक्स तथा डिजाइनदेखि क्यामरालगायतका विभिन्न फिचर्सका बारेमा केही समय यता सञ्चार माध्यमहरुले अनेक खुलासा गरिरहेका छन् । केही समयअघि सार्वजनिक भएको एउटा समाचारमा आइफोन १२ को संस्करणमा ६४ मेगापिकृसेलको प्राइमरी क्यामरा रहने दाबी गरिएको थियो ।
रिपोर्ट अनुसार आइफोन १२ सिरिजका सबै मोडेलहरुमा १२ मेगापिक्सेलकै मुख्य क्यामरा सेन्सर रहनेछ । रिपोर्टअनुसार एप्पलले पहिलोपल्ट आइफोन १२ भारतमा समेत उत्पादन गर्दैछ । आइफोनको उक्त मेड इन इण्डिया मोडेल भारतको बैंगलोरमा उत्पादन हुनेछ । बैंगलोरमा बन्ने आइफोन १२ सन् २०२१ को मध्यसम्ममा बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
हालैको एक रिपोर्टअनुसार आइफोन १२ सिरिजको मूल्य ७ सय देखि १२ सय डलर सम्म पर्नेछ । यसको अर्थ आइफोन १२ को सबैभन्दा महंगो मोडेल समेत आइफोन ११ भन्दा सस्तो हुनेछ । आइफोन १२ सिरिजमा आइफोन १२, १२ म्याक्स, १२ प्रो र १२ प्रो म्याक्स गरी विभिन्न ४ वटा मोडेल आउने बताइएको छ । यद्यपि नाम त्यहीँ नै रहन्छ भन्ने अहिलेसम्म एप्पलको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन ।
एक रिपोर्टअनुसार आइफोन १२ प्रो को डिजाइन धेरै हदसम्म आइफोन फाइभबाट प्रभावित हुनेछ । आइफोन १२ फाइभ जी मोडेलमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । एजेन्सी
#१२ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामरा कति पर्ला मूल्य ?
#आइफोन १२ भारतमा बन्ने
खाडी मुलुकहरुबीच सहमति, कतार बिरूद्धको प्रतिबन्ध अन्त्य
बेलायतमा एकै दिनमा ९८१ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
कोरोनाको नयाँ प्रकारले बढायो संसारभरीको चिन्ता, डब्ल्यूएचओको नयाँ बयान
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले लगाए कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप